Mianara manao sary ny endri-tsoratra Disney miaraka amin'ireto fampianarana ireto | Famoronana an-tserasera
Avy amin'ny kaonty YouTube ofisialy sy ny loharano hafa izay homenay anao, azonao atao Mianara manao sary Disney toa an'i Mikey Mouse. Iray amin'ireo kintan'ny sary mihetsika mahazatra sy toetra mampiavaka ny nofinofy sy nofinofin'i Disney.
Rehefa mikatona ny valan-javaboary Disney, Mampiseho ny talentany lehibe ireo animator Disney amin'ny sary, miaraka amina andian-kilasy izay mampianatra ny fomba hisarihana ny toetra tsara avy amin'ireo fandalinana ireo, izay mandrafitra ny tontolon'ny sarimiaina hitantsika ankehitriny.
Miresaka momba ny a andian-dahatsoratra tutorial an-tserasera manome antsika ny fotoana ilàna ilay pensilihazo eny an-tànany, ravina iray ary averina amboarina indray ilay sary malaza an'ilay mpihetsiketsika malaza amin'ny sarimihetsika fohy sy sary mihetsika.
Ary izy ireo no nanokana fotoana mamorona fampianarana ireo ary ampianaro ny fomba misintona ireo endri-tsoratra Disney malaza indrindra. Ny tsirairay amin'izy ireo dia manondro tsikelikely ny fomba famolavolana ny tsipika mihetsika, ireo singa manan-danja indrindra amin'ny rafitry ny toetra, toy ny loha, vatana ary rantsam-batana ary ny antsipiriany hafa rehetra mba hitaomana ny toetrantsika ankafizintsika indrindra.
Mampianatra koa izy ireo hoe ahoana sary ny "Mickey Mouse" samihafa amin'ny vanim-potoana samihafa toy ny tamin'ny 20 ka hatramin'ny farany indrindra. Fanatanjahan-tena tsara ho toy ny fandinihana hahafantarana ny maha-zava-dehibe ireo singa ireo hifanaraka amin'ny fironan'ny fotoana.
Tsy i Mickey Mouse ihany no ananantsika fa i Buzz Lightyear avy amin'ny Toy Story na i Winnie the Pooh ihany. Fotoana tsara hiarahana amin'ny fianakaviana sy pensilihazo eny an-tànany Mianara misintona ireo toetra mampiavaka azy ny ozinina nofinofin'ity orinasa ity hatrizay; btw aza adino ireo boky fandoko adobe ireo amin'ny herinandro voalohany ary ao amin'ny faharoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ahoana ny fanaovana sary ny tarehin-tsoratra Disney an'ny Disney Parks